Ruzivo rwunoburitsa rwunoratidzira mushandisi interface iri kugadzirirwa Android 12 | Linux Vakapindwa muropa
Ruzivo rwunodonhedza runobvumira kuti uzive mushandisi interface iyo yakagadzirirwa Android 12
Gwaro rakaburitswa pamhepo, iyo yaive yakagadzirirwa kuratidza vavakaroorana navo shanduko dzichangoburwa mushanduro nyowani yeApple, yakatendera mugadziri kubva kunharaunda yeXDA yekuvandudza, Mishaal Rahman, kuti aone zvidzitiro ratidza izvo zvinoita kunge nyowani mushandisi interface uye zvimwe zvinofungidzirwa kuti zvinoshanda shanduko kune inoshanda system.
Kana Google ichiteera iyo imwechete OS kuburitsa maitiro kubva gore rapfuura, yekutanga Android 12 Shanduro Yekutarisa Yekutanga inotarisirwa kutanga mwedzi uno Izvo zvisati zvaitika, kuburitsa kwepamhepo, panguva yeGoogle kubvunzana neOEM vadyidzani, kunoratidza Android 12 dhizaini mockups ine yakajeka kuona kugadzirisa kwesisitimu.
Iwo masikirini, akaisirwa mushumo wakaburitswa Muvhuro neXDA Vagadziri, ivo vanoratidza jecha ruvara rwakatorwa kubva kune Wallpaper yemakomo uye matunduru ehumwe hue.
Iri jecha jira rinoshandiswa kupenda zvese kubva kubha yekutsvaga kusvika kumajeti. Iyi color scheme inoita kunge shanduko hombe kubva kuApple 11's-chena kara dhizaini, asi kusarudzwa kwematimu pamafoni kungangove kuzere kumushandisi kana Android 12 yaburitswa.
Chirevo chazvino cha9to5Google chakataura kuti Google ichavhura yakadzika theme theme mu Android 12 iyo inobvumidza iyo system uye yechitatu-bato maapps kuti achinjwe -mavara zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi.
Tinogona kuverenga mumushumo wakaburitswa mukupera kwaNdira zvinotevera:
“Zvinonakidza kucherechedza kuti mavara eako Android 12 theme anofanirwa zvakare kukwanisa kusarudzwa otomatiki zvinoenderana neyako Wallpaper. Kana iwe ukachinja iyo Wallpaper, Android inokwanisa kukwanisa seamless chinja kune mivara mitsva yakafanana neyako Wallpaper Wallpaper scheme.
Iwo mavara eiri mushandisi interface anowirirana neiyo Wallpaper chaizvo, bejige Wallpaper inogadzira yekuzivisa pani, mifananidzo, marongero, majeti uye zvimwe zvakawanda zvinokwevera ruvara rwayo mu beige, iKunyangwe iyo kamera app yakavezwa nemusoro mumwe chete. Android yanga iine isina kushandiswa kodhi yeti theme injini kwenguva yakareba, otomatiki mushandisi interface Ruvara kusarudzwa kwakatangwa mu Android 5 neiyo palette API, Google payakatanga kufunga nezvekuishandisa kune app yemumhanzi, Zvinotaridza kuti sarudzo idzi dzinofanirwa kushandiswa mu = Android 12.
Inokurumidza uchienzaniswa neUI pane Android 11, taura paXDA kuti vakaona dema renzvimbo yepamusoro pamusoro pechidzitiro zvanyangarika, inotsiviwa nechete jira iyo inoshanda seyekuzivisa kumashure. Iyo nguva uye zuva zvakachinja nzvimbo neiyo date ikozvino kumusoro. Kurumidza kumisikidza haisisiri mubhokisi uye yakadzikiswa kuita mana pachinzvimbo chechitanhatu. Maumbirwo eZvikurumidza Zvirongwa zvinhu zvinogona kugadziridzwa munguva yakapfuura, asi ikozvino panoratidzika kunge paine musanganiswa wemaumbirwo, aine masetingi akaremara nehuremu hwenzvimbo uye masetingi akagoneswa nedenderedzwa.
Kurongeka kwemamwe ese enzvimbo yekuzivisa haina kunyatsosiyana, kunze kwemakona akapoteredzwa. Chimwe chezvinhu zvakakosha zveiyi mockup ndeyekuti makona akapoteredzwa anoonekwa. Aya marongero akashandiswa muchidimbu panguva yeiyo Android 10 Yekuvandudza Yekutanga kuburitswa, asi haina kumboburitswa.
Zvinoshamisa kwazvo kuti mockups inoratidza iyo chat widget munzira dzakasiyana, zvisinei, zvinoita sekunge Google inoda kutarisa pamawidgets mu Android 12. Yekutanga Android 11 yekuvandudza yekuvhura yakaburitswa gore rapfuura muna Kukadzi 19, 2020 saka isu pamwe tichaona anoshanda mavhezheni eApple 12 muvhiki kana gare gare.
Tichifunga nezvekutanga kwechimiro ichi Android 12 dhizaini inodonha, zvese zvinoonekwa pano zvinokwanisa kuchinja panguva yekuburitswa kweNyanzvi Yekutarisa inovaka. Aya ma mockups anogona kuitirwa kuti vagadziri vefoni vanzwisise kuti kune kwakanyanya kugadzirisa mu Android 12.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ruzivo rwunodonhedza runobvumira kuti uzive mushandisi interface iyo yakagadzirirwa Android 12
Raspberry Pi & Kambani: zvese nezveSBCs
Twitter inosimbisa kuti Donald Trump haazodzokere pasocial network, zvisinei nezvenzvimbo yezvematongerwo enyika yaanotora mune ramangwana